Wasaaradda Xannaanada Xoolaha oo shaacisay in dhowaan dib loo bilaabi doono dhoofinta Xoolaha – Radio Muqdisho
Wasaaradda Xannaanada Xoolaha oo shaacisay in dhowaan dib loo bilaabi doono dhoofinta Xoolaha
Wasiirka Xannaanada Xoolaha Dhirta iyo Daaqa Soomaaliya Sheekh Nuur Maxamed Xasan ayaa sheegay in dhoofinta xoolaha dalka ay meel wanaagsan marayaan, lana qaaday xayiraaddii saarneyd Dhoofinta Xoolaha Soomaaliya ee loo dhoofin jiray Dalka Sucuudiga taas oo lasaaray sanaddii 2017-kii.
Dalka Sacuudiga oo ah dalka ugu badan ee Soomaaliya looga dhoofiyo Xoolaha Nool ayaa bishii September ee sanadkii 2017-dii xayiraad saaray in loo dhoofiyo Xoolaha nool una sababeeyay in Xoolaha Soomaaliya ay qabaan Xanuunka Rift Valley, balse Wasaaradda Xannaanadda Xoolaha ayaa xaqiijisay inaan xanuunkaasi aysan qabin Xoolaha Soomaaliya, sida uu Wasiirka sheegay.
Wasiirka Xannaanadda Xoolaha dhirta iyo Daaqa Xukuumadda Soomaaliya Sheekh Nuur Maxamed Xasan ayaa sheegay in 24-kii bishii Augosto ee sanadkii 2017kii shir ay la yeesheen Wasaaradda deegaanka, Biyaha iyo Beeraha dalka Sacuudiga ay ka soo baxeen qodobo muhiim u ah dalkeenna oo ay ugu muhiimsaneyd in Sacuudiga qireen badqabka iyo caafimaadka Xoolaha Soomaaliya.
Dalalka ugu badan ee Soomaaliya Xoolaha nool ay u dhoofiso waxaa ka mid ah Masar, Cummaan oo xiriir wanaagsan ee dhanka dhoofinta kala dhaxeeyo Soomaaliya, Yemen iyo Sacuudiga oo ah dalka ugu badan ee Xoolaha looga dhoofiyo Soomaaliya sanadaha soo socda la kordhin doono.
Ugu danbeyntii, Wasiirka Xannaanada Xoolaha Soomaaliya wuxuu sheegay in la abuurayo Suuq Cusub oo Ganacsiga Xoolaha ah.
Guddiga Madaxa Bannaan ee dib u eegista Dastuurka oo daahfuray wajiga labaad ee dib u eegista Dastuurka KMG ah “SAWIRRO”
Guddiga Madaxa Bannaan ee dib u eegista Dastuurka oo daahfuray wajiga labaad ee dib u eegista Dastuurka KMG ah "SAWIRRO"